Tumira Mota Yangu kuUnited Kingdom | Yangu Mota Kunze
KUTAURA MOTA YAKO
KUUMAMBO Musuwo wakazara kusevha yekutakura sevhisi inoshandiswa nevadi vemotokari vanonzwisisa zvinorehwa nemotokari yako kwauri.
Isu tine yakakura network yekutumira & logistics vatinoshanda navo
Tipe nzvimbo yemota yako chero kupi zvako pasi uye isu ticha kuronga kuunganidzwa kune yepedyo yepasi rose chiteshi kana airport ipapo tobva taronga zvakakodzera kutakura kwemotokari yako kuenda kuUK.
Zvichienderana nenzvimbo yemotokari yako ichachinja mafambiro anoita mota yako kuUnited Kingdom. Yedu yekutumira makotesheni akanangidzirwa pamotokari yako uye akatemerwa mutengo panguva yekusika kuti akupe iwe wakanyanya mutengo unogoneka. Hapana zvekushomeka zvekuverenga macalculator pano apo isu patinoyedza kushandisa yakasimbiswa kutumirwa pazvinobvira kupfuudza pane yakachengetwa kwauri. Kusiyana nemamwe makambani anotumira isu tiri vekutanga uye chinonyanya kukosha kunyoresa kambani - saka isu tinogadzira zvinyorwa zvedu kuratidza mutengo wese wekupinza mota yako.
Sezvo tashanda nemakumi emakumi emakambani mumakore apfuura kuti tibatsire nemota dzinofamba hapana chatisingakwanise kubatsira kuendesa kuUnited Kingdom nenzira yakachengeteka, uye nekutumirwa kwakawanda pasi rese isu tine network yakakura senge hapana imwe kambani pamusika.
Zvese zvatakataura zvinosanganisira inishuwarenzi yemumvura yekuvhara mota yako mune zvisingawanzoitika kesi pane tsaona inosanganisira mota yako.
AIR, NYIKA, GUNGWA.
Tinopa nzira dzakasiyana siyana dzekutakura mota yako. Kana iwe uchimhanyisa kana uri kufambisa chimwe chinhu chakakosha kukosha, panogara paine kutakura nendege. Kana mota yako iri padhuze muEU pane mukana wakakura unogona kuendeswa pane anotakura, uye kune mota dziri mhiri kwegungwa, tinogona kuronga kutumira. Saka usazvidya moyo nezvekuti mota yako iripi, tichaiwana pano.
Isu tinobata zvese panzvimbo yako kuitira kuti iwe urege kuvawo. Izvi zvinoreva kuti iwe unogara uine mumwe munhu wekubatsira panguva yese yekufamba kwemotokari yako kuenda kuUnited Kingdom.